क्लियोपेट्रा सातौँ - विकिपिडिया
फ्रान्क बर्नाड डिक्सीद्वारा निर्मित क्लियोपेट्राको चित्र
मिश्रकी टोलेमिक महारानी
इपू ५१ देखि इपू १० वा १२, अगस्ट ३० (२१ बर्ष)
टोलेमी बाह्रौँ अलेट्स
नभएको (इजिप्ट माथी रोमद्वारा कब्जा)
क्लियोपेट्रा सातौँ थे फिलोपाटर
इजिप्टकी क्लियोपेट्रा पाँचौँ
एलेक्जेन्ड्रिया, टोलेमिक राज्य
इपू १० वा १२, अगस्ट ३० (३९ बर्ष)
एलेक्जेन्ड्रिया, रोमन इजिप्ट
क्लियोपेट्रा वा क्लियोपेट्रा सातौँ फिलोपाटर (ग्रिक, Κλεοπάτρα Φιλοπάτωρ अनुवाद: क्लेओपात्रा सातौँ; इपू ६९ अन्त्य – इपू १० वा १२, अगस्ट ३०) प्राचिन इजिप्टको टोलेमिक राज्यकी अन्तिम शासक थिइन। उनले इसापूर्व ५१ देखि इसापूर्व ३० सम्म मिश्र (हाल इजिप्ट)मा स्थित टोलेमिक राज्यमा शासन गरेकी थिइन्।  इतिहासकारहरूका अनुसार उनी जति सुन्दर र कामुक थिइन्, त्यो भन्दा धेरै गुणा चतुर, षडयन्त्रकारी र क्रुर थिइन्। क्लियोपेट्रा आफ्नो सौन्दर्यताको लागि गधाको दूधमा मह र जैतुनको तेल लगाएर नुहाउँथिन्।
१.२ जुलियस सिजरसँगको सम्बन्ध
१.३ मार्क एन्टोनीसँगको सम्बन्ध
क्लियोपेट्राको जन्म इसापूर्व ६९ मा टोलेमिक वंशमा भएको थियो। उनी १७ वर्षकी हुँदा उनको पिताको मृत्यु भएको थियो।  त्यस पछि मिश्रको प्रथा अनुसार क्लियोपेट्रा आफ्नै भाई टोलेमी तेह्रौँसँग विवाह गरेर दुबै मिलेर मिश्रमा शासन गरे। तर पछि उनीहरू बीच राज्याधिकारको लागि भएको संर्घषको परिणाम स्वरुप क्लियोपेट्रा भागेर सिरिया गइन्।
जुलियस सिजरसँगको सम्बन्ध[सम्पादन गर्ने]
जुलियस सिजर आफ्नो दुश्मन पोम्पेको पिछा गर्दै मिश्र आए । सिजरले क्लियोपेट्रालाई देखेपछि उनको सुन्दरता र मादक आँखामा लठ्ठिए । क्लियोपेट्राको जालमा फसेपछि क्लियोपेट्राको पक्षबाट युद्ध गरेर उनलाई मिश्रको रानी बनाउन सिजर तयार भए ।
जुलियस सिजरसँगको युद्धमा तोलेमी मारिए र क्लियोपेट्रा मिश्रको राजसिंहासनमा बसिन् । मिश्रको प्राचिन परम्पराअनुसार उनी आफ्नो अर्को सानो भाइको श्रीमती बनेर राज्य गर्न थालिन् तर केहि समयपछि नै उनले आफ्नो भाइलाई विष पिलाएर हत्या गराइन । त्यसपछि उनले अरसिनोइको पनि हत्या गर्न लगाइन् ।
जुलियस सिजरसँग क्लियोपेट्राको सम्बन्ध – क्लियोपेट्रा रोमन शासक जुलियस सिजरको रखैल थिइन् भनिन्छ । उनीबाट एक पुत्र पनि भयो तर, रोमनहरुले भने यो सम्बन्धको विरोध गरेका थिए । रोमन शासक जुलियस सिजरका सेनापति जनरल मार्क एन्थोनी पनि क्लियोपेट्राको सुन्दरतामा मोहित भए । क्लियोपेट्राले यो कुरा थाहा पाएपछि एन्थोनीलाई आफ्नो शिकार बनाइन् । दुवै पहिलेदेखि नै विवाहित भएपनि उनीहरु एकअर्काको प्रेममा थिए । यी दुवैले अलेक्जान्ड्रियामा शीत ऋतु एकैसाथ बिताएका थिए ।
एन्थोनीबाट उनीहरुको तीन बच्चा भयो । दस्तावेजहरुका अनुसार पछि यी दुईले विवाह गरेका थिए । एन्थोनीसँग मिलेर क्लियोपेट्राले संयुक्त रुपमा सिक्का पनि चलाएकी थिइन् । ४४ ईशापूर्वमा जूलियस सिजरको हत्या पछि एन्थोनीले उनको उत्तराधिकारी गाएस अक्टेभियनको विरोध गरे त्यतिखेर उनको साथमा क्लियोपेट्रा समेत थिइन ।
दुवै मिलेर रोमन साम्राज्यसँग टक्कर लिने योजना बनाए तर दुवै अक्टेभियनको फौजसँग पराजित भए । क्लियोपेट्रा आफ्नो ६० जहाजको साथमा युद्धस्थलबाट अलेक्जान्ड्रिया आइन । एन्थोनी पनि उनको पछिपछि आए तर, पछि अक्टेभियनले उक्साएपछि क्लियोपेट्राले एन्थोनीलाई धोका दिइन् । अक्टेभियनले एन्थोनीलाई क्लियोपेट्राले आत्महत्या गरिन् भन्ने सूचना दिए त्यो एन्थोनीले सुन्न सकेनन् र उनले आत्महत्या गरे ।
मार्क एन्टोनीसँगको सम्बन्ध[सम्पादन गर्ने]
जुलियस सिजरको हत्या पछि रोमको सत्तामा हावी भएका मार्क एन्टोनीले इसापूर्व ४१ मा रानी क्लियोपेट्रालाई रोमको भ्रमणका लागि आमन्त्रण गरे। त्यही भ्रमणको समयबाट क्लियोपेट्रा र मार्क एन्टोनीको प्रेम सम्बन्ध सुरु भएको थियो। पछि एन्टोनी टार्ससबाट फर्कने क्रममा क्लियोपेट्राले उनलाई इजिप्ट आउने निमन्त्रणा दिइन। क्लियोपेट्राको निमन्त्रणालाई स्विकार गर्दै एन्टोनी इसापूर्व ४१ को नोभेम्बरमा एलेक्जेन्ड्रिया पुगे। इपू ४० को बसन्तमा सिरियामा पार्थियन साम्राज्यका पूर्व अधिकारी क्विन्टस लेबिनसले एन्टोनीका गभर्नर लुसियस डेसियस साक्सालाई मारेर उनका सैनिकलाई कब्जामा लिए पछि उनले इजिप्ट छाडे। इपू ४० को अन्त्य तिर क्लियोपेट्राले एन्टोनीबाट जुम्ल्याहा सन्तानलाई जन्म दिइन्। उनीहरूको नाम हेलियस (सुर्य) र सेलेने (चन्द्र) राखियो।
क्लियोपेट्राको मृत्यु (जेन-एन्ड्रे रिक्सेन्सद्वारा १८७४ मा बनाइएको चित्र)
क्लियोपेट्राले रोमन राजा अगस्टससँगको युद्धमा हार ब्यहोरे पछि उनलाई नै आफ्नो सुन्दरताको जालमा फसाएर फेरि सत्ता प्राप्त गर्ने योजना बनाइन। तर अगस्टसले क्लियोपेट्राको हत्या गर्न लागेको चाल पाएपछि आँफैले एउटा कोब्रालाई टोकाएर आत्महत्या गरिन् भन्ने जनविश्वास छ।
↑ Burstein (2004), pp. xx–xxiii, 155. sfnp error: no target: CITEREFBurstein2004 (help)
↑ ३.० ३.१ ३.२ "क्लियोपेट्रा : जसको कामुकता र सौन्दर्यको सधै चर्चा भयो", www.onlinekhabar.com, अनलाइन खबर, अन्तिम पहुँच २४ सेप्टेम्बर २०२०।
↑ ४.० ४.१ "क्लियोपेट्रा- इतिहासकै सुन्दर र कामुक महिला", gorkhaawaj.com, गोर्खा आवाज, अन्तिम पहुँच २४ सेप्टेम्बर २०२०।
↑ "गधाको दूधले नुहाउँथिन् महारानी क्लियोपेट्रा", www.loksambad.com, लोक संवाद, अन्तिम पहुँच २४ सेप्टेम्बर २०२०।
↑ "प्राचीन रानीहरुको सौन्दर्य रहस्य", www.onlinekhabar.com, अनलाइन खबर, अन्तिम पहुँच २४ सेप्टेम्बर २०२०।
↑ "विश्वका पाँच चर्चित प्रेमप्रसंग", saptahik.com.np, कान्तिपुर साप्ताहिक, अन्तिम पहुँच २४ सेप्टेम्बर २०२०।
↑ Roller (2010), p. 79. sfnp error: no target: CITEREFRoller2010 (help)
↑ Burstein (2004), pp. xxii, 24. sfnp error: no target: CITEREFBurstein2004 (help)
विकिमिडिया कमन्समा क्लियोपेट्रा सम्बन्धी अन्य सामग्रीहरू रहेका छन्।
"https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=क्लियोपेट्रा_सातौँ&oldid=1066616" बाट अनुप्रेषित
यो पृष्ठलाई अन्तिमपटक १०:०२, २७ मे २०२२ मा परिवर्तन गरिएको थियो।